Sat, 03/10/2018 - 22:51
Kalfadhiga 3aad ee Baarlamaanka JFS oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.(Daawo)
Muqdisho:-Kalfadhiga 3aad ee Baarlamaanka Labada Aqal ee Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa maanta waxaa uu ka furmay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qeyb galay xubno ka socda beesha caalamka iyo marti sharaf kale .
Guddoomiyeyaasha Baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa qeyb ka ahaa kulanka maanta waxaana khudbad ka jeediyey madaxweynaha DFS Maxamed C/llaahi Farmaajo waxaana uuna Madaxweynaha uga hadlay khudbadiisa.
Wada shaqaynta DFS iyo dowlad Goboleedyada dalka wuxuuna sheegay in ay meel fiican mareyso lana xaliyey khilaafka DFS iyo Maamulgobaleedyada .
Madaxweynaha DFS ayaa waxaa uu sidoo kale ka hadlay Wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dhawaan furmi doona wuxuuna sheegay in wadahadal lagu xalin doona .
Khudbada Madaxweyna DFS ayaa waxaa uu ka hadlay socdaal uu ku tagay Gobolada Mudug iyo Galgaduud wuxuuna sheegay in ay guul ku soo dhamaatay .
Madaxweynaha DFS ayaa waxaa kale uu sheegay in lahir galin doono Mashaariicdii uu ka dhagax dhigay dhamaan gobalada dalka gaar ahaan Mudug ,Galgaduud iyo Bari.
Madaxweynaha DFS Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab wuxuuna sheegay in laga sifeyn doono gobalada dalka .
Ugu danbeyntii ayuu madaxweynaha DFS waxaa uu si adag uga hadlay heshiiska shirka DP World iyo Maamulka Somaaliland waxaana uu yiri “Ma jirto cid maalgashi dalka ka sameyn karta iyadoo aan fasax ama ogolaansho ka heysan Dowladda Fedaraalka ah ee Soomaaliya.”
Hoos ka Dhageyso Khudbadii Madaxweynaha DFS Maxamed C/llaahi Farmaajo uu ka jeediyey Baarlamaanka JFS.
Sh Daahir aw Cabdi oo wacdi qiimo leh ka jeediyey Masjidka Rowda ee Boosaaso.[Dhagayso]
Boosaaso:-Sh Daahir Aw-Cabdi oo ka mid ah culimada Soomaaliya kuwood ugu waaweyn ayaa maanta waxaa uu kalimad naseexo ah ka jeediyey khudbadii Jimce ka dib Masjidka Rowda ee Boosaaso wuxuuna Sheekhu uga hadlay duulaanka haweenka muslimka ah lagu soo qaaday iyo sidda la doonayo in looga saaro guryahooda loona sameeyey maalin ay u dabaaldegaan.
Hoos ka Dhagayso kalimada Sh Daahir Aw-Cabdi ka jeediyey masjidka Rowda ee Boosaaso
Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo looga hadlay amniga , Abaaraha iyo arrimo kale.
Garoowe:-Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu shir-guddoominayay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka Qab soomey Magalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal waxaan loga hadlar arrimaha amniga , abaaraha iyo arrimo kale.
Hoos ka eeg warsaxaafadeedka ka soo baxay shirka Golaha wasiirada ee Puntland
Madaxweynaha Puntland Doorasho waxay dhaceysaa Wakhtigeeda[ Video]
Garoowe:-Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horeysay shaaciyey wakhtiga ay dhacayso doorshada Puntland wuxuuna sheegay in ay dhacayso 8da January 2019. waxaana uu wareysi siiyey Idaacada Afka Soomaaliga ee BBC-da.
Hoos ka Daawo MMadaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Doorasho waxay dhaceysaa Wakhtigeeda